Alprazolam (အယ်လ်ပရာဇိုလန်) : ဘာအတွက်အသုံးပြုရတာလဲ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဘာတွေရှိလဲ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေရောသောက်လို့ရလား။ Hello Sayarwon
Alprazolam ကို မည်သည့်အကြောင်းအရာများအတွက် အသုံးပြုကြပါသလဲ။
Alprazolam ကို စိတ်ပူပန်ခြင်းနဲ့ ကြောက်လန့်တဲ့ ရောဂါတွေကို ကုသဖို့ အသုံးပြုပါတယ်။ သူဟာ ဦးနှောက်နဲ့ အာရုံကြောကို အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိပြီး တည်ငြိမ်တဲ့ ရလဒ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ benzodiazepine အုပ်စုဝင် ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ကိုယ်ခန္ဓါ အတွင်းမှာ သဘာဝအတိုင်းထုတ်လုပ်တဲ့ ဓါတုပစ္စည်းတွေကို အားပေးပါတယ်။
Alprazolam ကို ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်ပါသလဲ။
Alprazolam ကို သင့်ဆရာဝန် ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း သောက်သုံးသင့်ပါတယ်။ ဆေးပမာဏဟာ သင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေ၊ အသက်နဲ့ ကုသမှုကို တုန့်ပြန်မှုပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။ ဆိုးကျိုးတွေကို လျော့ကျစေဖို့ သင့်ဆရာဝန်က ဒီဆေးကို ပမာဏအနည်းဆုံးကနေ စပေးပြီး တဖြည်းဖြည်း တိုးမြှင့်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာဝန် ညွှန်ကြားချကိကို လိုက်နာသင့်ပါတယ်။
ဒီဆေးကို အကြာကြီး (သို့) ပမာဏအများကြီးသုံးစွဲပြီး ရုတ်တရက် ရပ်လိုက်ရင်ဆေးဖြတ်တဲ့ လက္ခဏာတွေ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာတော့ ဆေးဖြတ် လက္ခဏာတွေ ပြလာတတ်ပါတယ်။ ဒီလက္ခဏာတွေကို ကာကွယ်ဖို့ ဆေးကို ဖြည်းဖြည်းချင်းသောက်သင့်ပြီး ဆေးဖြတ်တဲ့ လက္ခဏာတွေ ရှိလာရင် ဆရာဝန်ကို အကြောင်းကြားသင့်ပါတ်ယ။
ဆေးကောင်းကျိုးတွေနဲ့ အတူ ဒီဆေးဟာ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ ဆေးစွဲတဲ့ ပြဿနာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အရင်က အရက် (သို့) ဆေးသုံးခဲ့ရင် ဖြစ်ဖို့ ရာနှုန်းပိုများပါတယ်။ ဆေးစွဲခြင်းမဖြစ်စေဖို့ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း သောက်သုံးသင့်ပါတယ်။
ဒီဆေးကိုအကြာကြီးသုံးစွဲရင်လည်း ဆေးစွမ်းမထက်တော့တာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဆေးစွမ်းမထက်တော့ရင်လည်း ဆရာဝန်ကို ပြောပြသင့်ပါတယ်။
Alprazolam ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Alprazolam ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ Alprazolam ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။
Alprazolam ကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Alprazolam ကိုမသောက်သုံးခင်မှာ ဘယ်အချက်အလက်တွေကို သိထားသင့်သလဲ။
Alprazolam မသောက်ခင်မှာ အောက်ပါအခြေအနေတွေ ရှိရင် ဆရာဝန်ကို ပြောပြသင့်ပါတယ်။
• alprazolam, chlordiazepoxide (Librium, Librax), clonazepam (Klonopin), clorazepate (Tranxene), diazepam (Valium), estazolam (ProSom), flurazepam (Dalmane), halazepam (Paxipam), lorazepam (Ativan), oxazepam (Serax), prazepam (Centrax), quazepam (Doral), temazepam (Restoril), triazolam (Halcion) သို့ အခြားဆေးတွေနဲ့ ဓါတ်မတည့်ရင်
• itraconazole (Sporanox) သို့ ketoconazole (Nizoral) အသုံးပြုနေရင်။ သင့်ဆရာဝန်က alprazolam သောက်စေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
အခြားဆေးတွေ၊ ဗီတာမင်တွေ၊ ဖြည့်စွက်စာတွေ၊ ဆေးဖက်ဝင် အပင်ထုတ်ကုန်တွေ သောက်နေတာ ရှိရင်။ အောက်ဖေါ်ပြပါဆေးတွေ သောက်နေရင် ဆရာဝန်ကို ပြောပြသင့်ပါတယ်။
desipramine (Norpramin) ကဲ့သို့ စိတ်ကျရောဂါအတွက် ဆေး
imipramine (Tofranil) ၊ nefazodone
မှိုပိုးသတ်ဆေး ။ fluconazole (Diflucan)၊ posaconazole (Noxafil) ၊ voriconazole (Vfend)
စိတ်ရောဂါ ၊ နာတာရှည် နာကျင်မှု နဲ့ အတက်ရောဂါ အတွက်ပေးသော ဆေးများ
selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) ။ fluoxetine (Prozac, Sarafem) ၊ fluvoxamine (Luvox) ၊ paroxetine (Paxil) ၊ sertraline (Zoloft)
အထက်ပါဆေးများ သောက်နေရပါက သင့်ဆရာဝန်ကို ပြောပြပါ။ သင့်ဆရာဝန်က ဆေးပမာဏ ပြောင်းလဲခြင်း (သို့) ဆေးရဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကို စောင့်ကြည့်ခြင်းတွေ ပြုလုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အောက်ပါအခြေအနေများရှိရင်လည်း ဆရာဝန်ကို ပြောပြပါ။
• အခြားသောက်နေတဲ့ ဆေးဖက်ဝင် အပင် ထုတ်ကုန်တွေ ရှိရင် အထူးသဖြင့် St. John’s wort
• ရေတိမ်ရှိရင် (ဆရာဝန်က ဆေးကို ညွှန်းချင်မှ ညွှန်းပါလိမ့်မယ်)
• စိတ်ကျခြင်း ဖြစ်နေရင် (သို့) ဖြစ်ဖူးရင်၊ သတ်သေချင်စိတ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထိခိုက်လိုစိတ်ရှိရင်၊ အရက်သောက်ရင်၊ ဆေးသုံးရင်၊ ဆေးလိပ်သောက်ရင်၊ အတက်ရောဂါရှိရင်၊ အဆုတ်ရောဂါ၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊ အသည်းရောဂါတွေရှိရင်
• အသက် ၆၅ နှစ်နဲ့ အထက်ဖြစ်ရင် ဒီဆေးရဲ့ ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေကို ဆရာဝန်နဲ့ မေးမြန်းတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။ အသက်ကြီးသူတွေမှာ ဒီဆေးဟာ ပမာဏအများကြီး သောက်သုံးရင် ကောင်းကောင်း အလုပ်မလုပ်တာကြောင့် ပမာဏအနည်းငယ်သာ သောက်သုံးသင့်ပါတယ်။
• ခွဲစိတ်မှု (သို့) သွားခွဲစိတ်မှု ပြုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင် ဆရာဝန် (သို့) ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကို ဒီဆေးသောက်နေကြောင်း ပြောပြသင့်ပါတယ်။
• ဒီဆေးဟာ အိပ်ငိုက်ခြင်းကို ဖြစ်စေတာကြောင့် ဆေးသောက်ထားရင် ကားမောင်းခြင်း (သို့) စက်ကိရိယာတစ်ခုခု အသုံးပြုခြင်းကို မပြုလုပ်သင့်ပါဘူး။
• အရက်ဟာ ဒီဆေးကြောင့် ဖြစ်တဲ့ အိပ်ငိုက်ခြင်းကို ပိုဆိုးစေပါတယ်။
ယခုဆေးဝါးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင် အသုံးပြုလျှင် ဆိုးကျိုးများရှိမရှိကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် လုံလောက်သော လေ့လာစမ်းသပ်ချက်များ မရှိပါ။ ဆေးမသောက်သုံးမီတွင် ဖြစ်နိုင်ချေကောင်းကျိုးများနှင့် ဆိုးကျိုးများအားလုံးကို ချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက် သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။ ယခုဆေးဝါးသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက်အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် D ရှိသည်ဟု သတ်မှတ်ထားသည်။
Alprazolam က ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိနိုင်လဲ။
အောက်ပါ ပြင်းထန် ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်ရင် ဆရာဝန်နဲ့ ပြသသင့်ပါတယ်။
စိတ်ကျခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကို သတ်သေလိုခြင်း၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထိခိုက်အောင် လုပ်လိုခြင်း၊ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ အပြုအမူ၊ အန္တရာယ်ကို မကြောက်ရွံ့ခြင်း
စိတ်ရှုပ်ခြင်း၊ လှုပ်ရှားမှုများခြင်း၊ စိတ်တိုခြင်း၊ ရန်လိုခြင်း၊ ဂယောင်ဂတမ်းဖြစ်ခြင်း
ထိန်းချုပ်မရသော ကြွက်သား လှုပ်ရှားမှုများ၊ တက်ခြင်း
အရေပြား၊ မျက်လုံး ဝါခြင်း
အိပ်ငိုက်ခြင်း၊ ခေါင်းမူးခြင်း၊ ပင်ပန်းခြင်း၊ စိတ်တိုခြင်း
မျက်စိဝါးခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ မှတ်ဉာဏ် ပြဿနာများ၊ အာရုံစူးစိုက်ရ ခက်ခဲခြင်း
ကြွက်သားအားနည်းခြင်း၊ ထိန်းညှိမှု အားနည်းခြင်း၊ စကားမပီခြင်း
ဗိုက်နာခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း၊ ဝမ်းလျှောခြင်း၊ ဝမ်းချုပ်ခြင်း
ချွေးထွက်များခြင်း၊ ပါးစပ်ခြောက်ခြင်း၊ နှာရည်ကျခြင်း
အစာစားချင်စိတ် (သို့) ကိုယ်အလေးချိန်ပြောင်းလဲခြင်း၊ ဆန့်ကျင်မှု လိင်ကို စိတ်ဝင်စားမှု နည်းခြင်း
ဘယ်ဆေးဝါးတွေက Alprazolam နဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်သလဲ။
Alprazolam ဟာ သင်အခုလောလောဆယ် သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေ အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိ သောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ် ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
ဒီဆေးမသောက်ခင်မှာ သင့်ကိုအိပ်ငိုက်စေတဲ့ အခြားဆေးတွေ (ဥပမာ တုတ်ကွေးပျောက်ဆေး၊ ဓါတ်မတည့်မှုပျောက်ဆေး၊ အိပ်ဆေး၊ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး၊ ကြွက်သားလျှော့ဆေး၊ အတက်ကျဆေး၊ စိတ်ကျပျောက်ဆေးနဲ့ စိတ်ပူခြင်းအတွက် သောက်ဆေး) တွေ သောက်နေတာ ရှိရင် ဆရာဝန်ကို ပြောပြသင့်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ဒီဆေးကြောင့် အိပ်ငိုက်ခြင်းကို ပိုဆိုးစေပါတယ်။
အထူးသဖြင့် အောက်ဖေါ်ပြပါဆေးတွေ သောက်နေရင် ဆရာဝန်ကို ပြောပြသင့်ပါတယ်။
Cyclosporine (gengraf ၊ neural ၊ sandimmune)
Dexamethasone (cortastat ၊ dexasone ၊ solurex ၊ dexpak)
Ergotamine (cafergot ၊ ergomar ၊ migergot)
ပိုးသတ်ဆေး clarithromycin (biaxin)၊ erythromycin (eryped ၊ ery-tab ၊ erythrocin ၊ pediazole) ၊ rifabutin (mycobutin) ၊ rifampin (rifadin ၊ rifater ၊ rifamate) ၊ rifapentine (priftin) ၊ telithromycin (ketek)
မှိုပိုးသတ်ဆေး ။ miconazole (oravig) ၊ voriconazole (vfend)
စိတ်ကျရောဂါ သက်သာဆေး ။ fluoxetine (Prozac ၊ sarafem ၊ symbyax) ၊ fluvoxamine (luvox) ၊ desipramine (norpramin) ၊ imipramine (janimine ၊ tofranil)၊ nefazodone
butabarbital (butisol) ၊ secobarbital (seconal) ၊ pentobarbital (nembutal) ၊ phenobarbital (solfoton)
နှလုံးဆေး နှင့် သွေးတိုးကျဆေးများ ။ amiodarone (cordarone ၊ pacerone) ၊ diltiazem (tiazac ၊ cartia ၊ cardizem) ၊ nicardipine (cardene) ၊ nifedipine (nifedical ၊ procardia) ၊ quinidine (quin-g)
HIV/AIDS ဆေး။ atazanavir (reyataz)၊ delavirdine (rescriptor)၊ efavirenz (sustiva၊ atripla) ၊ etravirine (intelence) ၊ indinavir (crixivan) ၊ nelfinavir (viracept) ၊ nevirapine (viramune) ၊ saquinavir (invirase) ၊ ritonavir (norvir ၊ kaletra)
အတက်ကျဆေးများ ။ carbamazepine (Carbatrol ၊ Equetro ၊ Tegretol) ၊ felbamate (Felbatol) ၊ oxcarbazepine (Trileptal) ၊ phenytoin (Dilantin) ၊ primidone (Mysoline)
အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာတွေက Alprazolam နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ပါသလား။
Alprazolam က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။ Grapefruit ဖျော်ရည် သောက်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။
ဘယ်လိုကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေက Alprazolam နဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိမလဲ။
Alprazolam ဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီပါတယ်။ အထူးသဖြင့်
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေမှာ Alprazolam ကို သောက်သုံးရမယ့်အချိုးအစားက ဘယ်လောက်လဲ။
အောက်ပါဆေးပမာဏများသည် လူကြီးအတွက် ပေးရမည့် ပမာဏဖြစ်ပါသည်။
Immediate-release tablets ၊ orally disintegrating tablets ၊ oral concentrate သောက်ဆေးများကို
ကနဦးပမာဏ ။ 0.25 to 0.5 mg တစ်ရက် သုံးကြိမ်သောက်ရန်။ လူနာခံနိုင်ရည်အားပေါ် မူတည်ပြီး လိုအပ်သလို ဆေးကို ၃-၄ ရက် တစ်ခါ တဖြည်းဖြည်းတိုးသွားသည်။
ဆက်လက်သောက်သုံးရန် ပမာဏ ။ အများဆုံး4mg ထိ ကိုတိုးပေးနိုင်သည်။ ပမာဏကို အကြိမ်ရေများခွဲ၍ ပေးရမည်။
ရုတ်တရက် အလွန်အမင်း ကြောက်ရွံ့ခြင်း (Panic disorder) အတွက်
Immediate-release tablets, orally disintegrating tablets သောက်ဆေးများကို
ကနဦးပမာဏ ။ 0.5 mg တစ်ရက် သုံးကြိမ်သောက်ရန်။ လူနာခံနိုင်ရည်အားပေါ် မူတည်ပြီး လိုအပ်သလို ဆေးကို ၃-၄ ရက် တစ်ခါ တဖြည်းဖြည်းတိုးသွားသည်။
ဆက်လက်သောက်သုံးရန် ပမာဏ ။ တစ်နေ့ 1 to 10 mg ကို အကြိမ်ရေများခွဲ၍ ပေးသည် ။per day in divided doses.
Extended-release tablets သောက်ဆေးကို
ကနဦးပမာဏ ။ 0.5 mg to 1 mg တစ်ရက် သုံးကြိမ်သောက်ရန်။ လူနာခံနိုင်ရည်အားပေါ် မူတည်ပြီး လိုအပ်သလို ဆေးကို ၃-၄ ရက် တစ်ခါ 1mg ထက် မပိုသော ပမာဏအထိ တဖြည်းဖြည်းတိုးသွားသည်။
ဆက်လက်သောက်သုံးရန် ပမာဏ ။ 1 to 10 mg တစ်ရက် တစ်ကြိမ်
Immediate-release tablets, orally disintegrating tablets, oral concentrate သောက်ဆေးများကို
ကနဦးပမာဏ ။ 0.5 mg တစ်ရက် သုံးကြိမ်သောက်ရန်။ သုံးကြိမ်သောက်ရန်။ လူနာခံနိုင်ရည်အားပေါ် မူတည်ပြီး လိုအပ်သလို ဆေးကို ၃-၄ ရက် တစ်ခါ 1mg ထက် မပိုသော ပမာဏအထိ တဖြည်းဖြည်းတိုးသွားသည်။
ပျမ်းမျှ ပမာဏ ။ စိတ်ကျရောဂါ အတွက် alprazolam အသုံးပြုမှုကို လေ့လာထားချက်များအရ အာနိသင်ထိရောက်သော ပျမ်းမျှပမာဏသည် နေ့စဉ် တစ်ရက်ကို သောက်ဆေး3mg ကို အကြိမ်ရေခွဲ၍ ပေးခြင်းဖြစ်သည်။
အများဆုံး ပမာဏ ။ စိတ်ကျရောဂါ အတွက် alprazolam အသုံးပြုမှုကို လေ့လာထားချက်များအရ အများဆုံးပမာဏသည် နေ့စဉ် သောက်ဆေး 4.5 mg ကို အကြိမ်ရေ ခွဲ၍ ပေးခြင်းဖြစ်သည်။
ကလေးငယ်တွေမှာ Alprazolam ကို သောက်သုံးရမယ့်အချိုးအစားက ဘယ်လောက်လဲ။
Alprazolam ကို ဘယ်လိုပုံစံမျိုး အချိုးအစားမျိုးတွေနဲ့ရရှိနိုင်မလဲ။
Alprazolam ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
သောက်ဆေး ၊ Extended Release tablet ။ 0.5 mg ၊ 1 mg ၊2mg ၊3mg
အရေးပေါ်အခြေအနေသို့မဟုတ် ဆေးပမာဏ လွန်သွားတဲ့အခြေအနေတွေမှာ အရေးပေါ် ဆေးရုံဆေးခန်းများသို့ သွားရောက်ကုသမှုခံယူပါ။
Alprazolam ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Alprazolam. https://www.drugs.com/alprazolam.html. Accessed Aug 15, 2016.
Alprazolam (Oral Route). http://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/alprazolam-oral-route/description/drg-20061040. Accessed Aug 15, 2016.
Alprazolam, Xanax, Xanax XR, Niravam. http://www.medicinenet.com/alprazolam/article.htm.Accessed Aug 15, 2016